मौनतामा अल्झिरहेको एउटा प्रेम….वर्षा शिवाकोटी « Mazzako Online
मौनतामा अल्झिरहेको एउटा प्रेम….वर्षा शिवाकोटी
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीको प्रेमको चर्चा खुबै हुने गर्छ । फिल्मी बजार उनको प्रेम र ब्रेकअपको चर्चाले रंगिएको छ । पछिल्लो समय सिने नगरीमा प्रेम र ब्रेकअपको चर्चा सबैभन्दा धेरै कसैको भईरहेको छ भने त्यो बर्षा शिवाकोटी नै हुन् । अमेरिका निवासी सविन थापासँग ब्रेकअपछि उनको नाम राज कटुवालसँग जोडिएको छ ।
राज चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य हुन् । पछिल्लो समय राज र बर्षा एक अर्कासँग निकै नजिकिएका छन् । सँगै होली मनाए, प्राय सँगै देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि प्रेमिल तस्वीरहरु सेयर भईरहेको हुन्छन् । बर्षाको जन्मदिनमा राजको उपस्तिथी र उनले दिएको उपहार, चर्चा धेरै छ सिने नगरीमा । तर यता, अभिनेत्री वर्षाले भने प्रेमको बिषयमा आफूले नभनेसम्म त्यो पुष्टी नहुने बताएकी छिन् । उनले आफ्नो नाम कस कससँग जोडेर आएतापनि आफूले नभनेसम्म त्यो पुष्टी नहुने पनि बताइन् ।
सविनसँग पनि आफूले प्रेम थियो भनेर नभनेको उनले बताएकी छिन् । वर्षा सिवाकोटीले राज कटुवालसँग पनि आफ्नो प्रेम नभएर मित्रता मात्र भएको बताउँदै आएकी छिन् । अब आफुले नबताएर के भयो त बर्षा जी, सारा चलचत्रि नगरीले बताईरहेको छ । अब पनि बताउन केही बाँकी रहन्छ र ? देख्नेले देखिईरहेका छन्, चर्चा गर्नेले गरिरहेका छन्, भन्नेले भनिईरहेका छन् ।
सविनले त झन स्टेटस नै लेखेर ब्रेकअप भएको भनेर बताए । मिडियामा खुबै गसिप पनि बन्यो, अब तपाई मात्रै चुप लागेर अरु चुप लाग्दैनन् क्यारे । हैन र ? वर्षा पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा व्यस्त अभिनेत्री हुन् । सिनेमा पनि धेरै गरिसकिन्, भलै सिनेमा हिट छैनन् होला तरपनि उनलाई कामको अभाव छैन । तर, पछिल्लो समय भने उनको प्रेम चर्चाले, उनको ब्रेकअप र लभ अफेयरको चर्चाले उनको फिल्मी करियरलाई नै ओझेलमा पार्दै लगिईरहेको छ ।
प्रेमको हल्ला र गसिपबारे आफु सधै मौन बस्ने बर्षाले उनको यो मौनता कहिले तोडलिन् हेर्न बाँकी छ । हाम्रो तर्फबाट भने बर्षा र राजलाई प्रेमजीवनको शुभकामना । जे होस्, जोडी राम्रो छ ।